कार्यकाल सकिनै लाग्दा के चाहन्छन् कुलमान ? - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७७, मंगलबार ५ : ३५
चार वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा घिसिङ चर्चामा रहेका हुन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा उनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा धेरै मानिसहरु रहेका छन् ।
घिसिङ भदौं २९ गते चार वर्षे कार्यकाल सकेर विदा हुँदैछन् । धेरैले उनको कार्यकाल थप होस् भन्ने सुभेक्षा सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट राखिराखेका छन् ।
जागिरको लागि कुलमानले तीन स्थानमा आवदेश दिए । परीक्षा दिएको मध्ये हवाइ विभाग, लोकसेवा र विद्युत प्राधिकरणमा घिसिङले नाम निकाले
कयौंपटक आफ्नो टिमले राति दुई बजेसम्म काम गरेर निर्णयमा पुग्ने गरेको कुलमानले स्मरण गरे
आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही रुपमा निभाएका कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताउने कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक भएपछि लोडसेडिङ हट्छ भन्दा मानिसहरु भावुक भएको र विभिन्न अनलाइन र समाचारहरुमा भावुक कमेन्टहरु गरेको उनी बताउँछन् । ‘मानिसहरुबाट यति धेरै सेन्टिमेन्ट आयो कि मैले पछि मानिसहरुमा लोडसेडिङले पारेको प्रभाव पछि मात्र थाहा पाएँ ’ उनले भने ।
चर्चापछि थप चुनौती
प्राधिरणमा सकिँदो कार्यकाल र कुलमानको इच्छा
माथिनै उल्लेख गरिसकिएको छ कि केही दिनपछि उनको कार्यकाल सकिँदैछ ।
तर स्वयं कुलमान चाँही यसबारे के भन्छन् त ?
कुलमान कार्यकाल थप गर्ने प्रशासनिक प्रकृया रहेको बताउँदै विद्युत प्राधिकरणमा धेरै काम बाँकी रहेकोले डाइनामिक व्यक्ति नेतृत्वमा चाहिने उनी बताउँछन् । उनी आफू नभइ प्राधिकरणमा केही हुँदैन भन्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन् ।